အဝလွန်: အချိန်မအတွက်ဗိုက်အဆီဆုံးရှုံး; ရှိမုနျကို Calvallo သစ်ပုံသေနည်း - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လှပမှု • ပညာရေး • စာပေ • ကျွန်မရဲ့ကျန်းမာရေး • ကိုယ်အလေးချိန် • သိပ္ပံ "အဝလွန်: အချိန်မအတွက်ဗိုက်အဆီဆုံးရှုံး; ရှိမုနျကို Calvallo သစ်ပုံသေနည်း
အဝလွန်: အချိန်မအတွက်ဗိုက်အဆီဆုံးရှုံး; ရှိမုနျကို Calvallo သစ်ပုံသေနည်း
Eliséoမင်းသမီး Emma Kamgang 16 ခုနှစ်ဧပြီလ 2019
X အီးမေးလ်ပို့ရန်1 Reddit0 Stumbleupon0
အဝလွန်: တစ်ဦးက Grenoble အင်ဂျင်နီယာနေ့တိုင်းအနည်းငယ်အဆီဆုံးရှုံးရန်ပုံသေနည်းရှာဖွေတွေ့ရှိထားပါတယ်
ဒါဟာအဆီ destocking cellulite ဖယ်ရှားပစ်ကာပြားချပ်ချပ်အစာအိမ်ပြန်လည်ရန်အစွန်းရောက်နည်းလမ်းသစ်တင်ပြပြီးနောက်ဘတ်ဇ်ပါတယ်။ ယနေ့အထိလူသိများအားလုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို defies ကြောင်း Grenoble 41 နှစ်ပေါင်း 100% ကသဘာဝနည်းလမ်း၏အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးကဖန်တီး။ အမှန်မှာကစာမစားဘဲမလိုအပ်ပါဘူးမျှကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုချမှတ်ထားတဲ့နှင့်၎င်း၏ application အားတစ်နေ့လျှင်မိနစ်သာ 10 20 ကြာပါသည်။
ဒါကြောင့်ပြီးသား 100 000 မိတ္တူကူးရောငျးခခြဲ့တဲ့အရောင်းရဆုံးစာအုပ်အဖြစ်၏ရေးသားသူဖြစ်ပါသည်ကတည်းကရှိမုနျကို Cavallo, ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့နည်းလမ်း၏ဖန်ဆင်းရှင်, သူ့ရဲ့ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ says:
"ကျွန်မပါးလွှာအလယ်၌အလုပ်လုပ်ခဲ့သူတစ်ဦး mom, အတူကြီးပြင်းလာတယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါသည်ဤကျော်ကြားသော "အစိုးရ" ၏ကြားဖူးတယ်။ အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုအံ့အားသင့်အားမိန့်တော်မူသောလူအသက်အဘို့အအစားအသောက်များတွင်သလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကြောက်မက်ဘွယ်သော "YoYo အကျိုးသက်ရောက်မှု" ၏။ "
မကြာသေးမီက 2010 အတွက် ANSES (ပြင်သစ်တွင်သန့်ရှင်းလုံခြုံရေးတို့အတွက်အမျိုးသားအေဂျင်စီ) ကထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုဒီခံစားမှုပိုမိုဆိုးရွားစေခဲ့သည်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်အစီအစဉ် 95% ပျက်ကွက်မှုအတွက်အဆုံးသတ်ကြောင်းပြသထားပါတယ်1.
ဒီအခြေအနေကိုငြီးငွေ့, ဒါရှိမုနျကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းနောက်ဆုံးတော့စတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခြားသူတွေဟောင်းချဉ်းကပ်မှု (ထိရောက်မှု) ပြန်သုံးဖို့အကြောင်းအရာများမှာဘယ်မှာဒါပေမယ့်သူတစ်ဦးအလွတ်စာမျက်နှာ left:
"ကျနော်တို့နည်းနည်းပြောသောသောဤအသစ်သော technique ကိုရှိခဲ့သည်။ ပြင်သစ်မှာတော့ဘယ်သူမှယုံကြည်သည်။ သူတို့ကတစ်ဦးဂျိုကာအဘို့အကြှနျုပျကိုခေါ်သွားတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြီးသားအမြားအစဉ်။
သငျသညျယခုအဝလွန်သို့မဟုတ်အဝလွန်ပေါ်မှာဤ technique ကို၏ဆိုးကျိုးများအပေါ် 540 ကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများထက်ပိုရှိတယ်လို့သိသင့်2။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးရလဒ်များကိုရောက်ရှိလာခဲ့သောအခါမှတပါး, လူတိုင်းကသူ့ညှိပြောင်းလဲသွားတယ် ... "
ထိုအချိန်မှစ. နိုင်ငံများမှ 28 000 91 ကျော်စိတ်အားထက်သန်သောလူကိုတခါတရံရလဒ်များကိုနှင့်အတူ, ဒီဆန်းသစ်တဲ့နည်းလမ်းစမ်းသပ်ပြီး* ဖြစ်နိုင်သမျှသလိုပဲတစုံတခုကိုမျှကျော်လွန်ပြီး။
ဒီနည်းလမ်းကို၏ထိရောက်မှုဖို့လျှို့ဝှက်ချက်သာ Diet အားအသစ်သောချဉ်းကပ်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးမပေးပါ။
ဒီချဉ်းကပ်မှုမှအစစ်အမှန် key ကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကိုယ်အင်္ဂါ, ရှည်လျားလွန်းရှိသမျှသည်အခြားသောချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့်လျစ်လျူရှုကာကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို၏ activation ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရှင်းစွာကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုအခြေခံကျကျဒီလိုလူနာများ၏ရလာဒ်များတို့ကိုများပြားစေ "ပေါ်တွင်အကူးအပြောင်း"*နှင့်ရေရှည်တည်တံ့။ သင်တစ်ဦး button ကိုနှိပ်လျှင်အဖြစ်။
"ငါ့အသင်းနှင့်အတူငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ဟာအဝလွန်ပြဿနာများပပျောက်ရေးဖို့မစ်ရှင်ခန့်ထားပြီ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ကြာမြင့်မည်, သို့သော်လောင်းကြေးကြီးမားများမှာ!
ကျနော်တို့အကြီးမြတ်ဆုံးအရေအတွက်ကဒီနည်းပညာကိုဖြန့်ဖြူးရန်ထက်ပိုမို3ယူရိုသန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပါပြီဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ပိုမိုလူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ချဉ်းကပ်ရန်လှည့်နေကြပါတယ်။ ဒီ technique ကိုသုံးစွဲဖို့များပါတယ်သောအများပြည်သူသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များ (ဆရာဝန်တွေ, အရိုးအကြောအဆစ်, osteopathes), အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်။ ဤသည်ချဉ်းကပ်ရှင်းလင်းစွာနောက်ဆုံးတော့လူတွေသန်းပေါင်းများစွာဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ပြဿနာကိုဖယ်ရှားပစ်ရရန်ခွင့်ပြုနိုင်မယ့်တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်။ "
ရှိမုနျကိုပြီးသားအင်တာနက်ကိုလှည့်ပတ်ခဲ့ခြင်းနှင့်လအတွင်း 308 2403အချိန်ထက်ပိုပြီးကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သည့်ဗီဒီယိုသစ်တစ်ခု, posted:
SpaceX စွန်ငှက်အကြီးစားသမုဒ္ဒရာ၏၎င်း၏အမာခံအကျိုးအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည် - BGR